Home Archives - Mozilla Myanmar | Mozilla Myanmar
Firefox ( 20.0 ) ဧပြီလ နှစ်ရက်နေ့မှာ မီးမြေခွေး ဗားရှင်း ( ၂၀.၀ ) ထွက်ပါတယ် ။ ထွက်ထွက် ခြင်း အဆင့်မမြှင့်ဖြစ်ပါဘူး ။ အရင် ဗားရှင်း ( ၁၉ ) တုန်းက တော့ ပြသာနာလေးတွေ နည်းနည်းရှိခဲ့လို စမ်းတုန်း ကလိတုန်း မို့လို့ပါ။ ဒါပေမယ့် ဗားရှင်း အသစ်မှာ အဆင်ပြေသွားပြီလို့ ကြားလို့ တင်လိုက်ပါတယ်။ အားလုံး ပေါင်း ၁၃မဂ် လောက် ဒေါင်းလိုက်ရပါတယ် … Continue reading
Another Add-On fromaMyanmar Developer
This time , it was Thant Thet who tried this brilliant work-up . He did some development in WordPress called Myanmar Unicode Font Tagger and we use his plug-in here in mozillamyanmar.org to display our unicode text correctly. Now it … Continue reading
Tags: addon, development, FontTagger, Unicode